TOAMASINA : Nidangana ny vidim-piainana taorian’ny fandalovan’ny rivodoza Ava
Mikaikaika ny rehetra. Nisondro-bidy ny vidim-piainana ao Toamasina taorian’ny fandalovan’ny rivodoza Ava. 12 janvier 2018
Ho an’ny vary dia tsy nahitana fiakarana manokana fa eo amin’ireo sakafo fihinana hafa sy ny legioma no nahitana fisondrotana avo dia avo. Ho an’ny legioma dia tafakatra 2 000 Ar ny kilaon’ny anana raha latsaky ny 1 000 Ar izany teo aloha.
Ho an’ny voatabia dia tsy mahazo voatabia intsony ny 100 Ar fa 200 Ar miakatra vao mahazo. Nahitana fiakarana 100% ny voatabia. Raha 2 000 Ar ny iray kilao teo aloha dia lasa 4 000 Ar izany ankehitriny. Ho an’ny tongolo dia efa tafakatra 4 000 Ar ihany koa ny iray kilao. Ho an’ny karoty, dia 3 500 Ar raha manodidina ny 1 200 Ar hatramin’ny 2 000 Ar izany teo aloha.
Nisondro-bidy ihany koa ny anamalao. Tsy mahazo anamalao intsony 100 Ar fa lasa 200 Ar. Ny angivy izay vidina 100 Ar ka hatramin’ny 200 Ar dia lasa 400 Ar. Saika ireo tsena rehetra ao Toamasina no nahitana io fisondrotam-bidy goavam-be io. Tsy niandry ela ihany koa ireo mpitondra posiposy fa nampiakatra avy hatrany ny saran-dalana. Lasa 1 500 Ar ka hatramin’ny 3 000 Ar ny saran-dalana ho an’ny posiposy bisikileta ao Toamasina. Tsy mbola nampiakatra kosa ireo bajaj sy taksibe.
Mitady ho very an-javony ny raharaha Mbola Rajaonah, Rolly, Fidèle FANAKORONTANANA FILAMINAM-BAHOAKA (295) 14 janvier 2019 Halefa eny amin’ny Fitsarana amin’izay ny dosien’i Mbola Rajaonah TALE JENERALIN’NY BIANCO (170) 17 janvier 2019 Nanamafy ny fanovana goavana hoentiny ny Filoha Rajoelina FANDRAISANA NY FITANTANANA NY FIRENENA (76) 20 janvier 2019 Tafakatra sivy ireo olona namoy ny ainy MAHAMASINA - FIHOTSAHANA TRANO (72) 20 janvier 2019 Rangahy iray 64 taona maty notetitetehina TSARAVANJA - ANTETEZAMBARO (55) 20 janvier 2019 Nahitana ombivavy bevohoka novonoin’olona AMPITOLOVA BELOBAKA MAHAJANGA (50) 20 janvier 2019